एक वर्षपछि खुले विद्यालय | eAdarsha.com
मनाङ। कोरोना महामारी र चिसोले बन्द भएका मनाङका विद्यालय झण्डै एक वर्षपछि सञ्चालनमा अएका छन् । गत वर्ष जाडो सकेर विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गर्दैगर्दा कोरोनाले एसइई परीक्षा स्थगित भएसँगै बन्द भएका यस क्षेत्रका विद्यालय विसं २०७६ चैत महिनादेखि हालसम्म बन्द नै भए ।
नासोँ गाउँपालिका–१ तालमा रहेको भानु मावि र नासोँ गाउँपालिका– ५ थोँचेस्थित प्रकाशज्योति माविमा पनि माघ २५ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन भएका छन् । मनाङको तल्लो क्षेत्रको चामे र नासोँ गाउँपालिकाका विद्यालय खुलेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मनाङका प्रमुख नारायण रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका र नार्पाभूमिका ११ विद्यालयमा भने पठनपाठन शुरु भएको छैन । विद्यालयमा फागुन १६ गतेबाट पठनपाठन शुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मनाङका प्रमुख रेग्मीका अनुसार शिक्षा नियमावलीले ४५ दिन बिदा पाउने प्रावधान छ । स्थानीय बिदा पाँच दिन पाउँछन् । तर माथिल्लो क्षेत्रमा तीन महिना र तल्लो क्षेत्रमा साढे दुई महिना विद्यालय बन्द हुने गरेको छ । यस वर्ष कोरोनाका कारणले भने पठनपाठन नहुँदा यो शैक्षिकसत्र नै प्रभावित भएको छ । जिल्लामा २६ सामुदायिक विद्यालय र एक निजी विद्यालय छन् । जिल्लाभर चार मावि, आठ आधारभूत तह र १५ वटा प्राविमा १९० शिक्षक दरबन्दी छन् ।
जिल्लाभर ६०२ विद्यार्थी अध्यनरत रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मनाङले जनाएको छ । माथिल्लो भेगका विद्यालय भने कुनै कक्षा सञ्चालन नभइकन यो शैक्षिकसत्र सकिएको छ । तल्लो भेगमा भने वैशाख महिनादेखि नै नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुने गरेको छ । अब नयाँ भर्न अभियान गर्ने कि पुरानै कक्षा सञ्चालन गर्ने दोधारमा रहेको छ ।
काठमाडाैं । सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी पोखरासहित ठूला सहरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास…
पोखरा । सरकारले सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख सहरी…
पोखरा । कोरोना नियन्त्रण र समसामयिक वियषका बारेमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारमा बस्दै छ। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमण…
पाेखरा । पोखरा महानगर भित्रका विद्यालयले वैशाखभित्रै आफ्ना वार्षिक परीक्षा सकिसक्नुपर्ने महानगर शिक्षा समितिले जनाएको छ । कोरोनाको बढ्दै गर्दा…
पोविवि राजिस्ट्रारमा डा दीपक भण्डारी
पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा सहप्राध्यापक डा. दीपकबहादुर भण्डारी नियुक्त भएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा प्रेमनारायण अर्यालयको सिफारिसमा कुलपति…
जसपाका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता, रेशम चाैधरीकाे मुद्दा के भयाे हाेला ?
संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय